Lenovo Watch S sy Watch C: ireo fiambenana marani-tsaina vaovao an'ny orinasa | Androidsis
Nihetsika i Lenovo tao anatin'ny ora vitsivitsy lasa izay. Ny orinasa sinoa dia tsy nandefa telefaona hafa ary tsy latsaky ny telefaona vaovao telo: ny Lenovo S5 Pro, K5 Pro sy K5s. Na eo aza izany, nampiditra fitaovana vaovao roa ny orinasa sinoa Na ny tena izy, famantaranandro marani-tsaina.
Miresaka momba ny Lenovo Watch S sy Watch C. Ny voalohany dia smartwatch kendrena ho an'ny mpihaino izay mampiasa fampiasa mahazatra sy ankapobeny, fa ny faharoa kosa mifantoka amin'ny ankizy. Atolotray anao ireo!
1.1 Vidiny sy misy
2.1 Vidiny sy misy
El Lenovo Watch S izy io dia ny Watch 9 miaraka amina famolavolana dial, kristaly safira ary zanak'omby.
Ny famantaranandro dia manara-maso ny torimasonao, manisa kaloria ary manoratra ny isan'ny dingana nataonao, na dia tsy manana sensor tahan'ny fo aza izy, mpanara-maso ny tosidra, ary ireo sensor hafa. ihany koa mampahafantatra ny antso sy ny hafatra amin'ny vibration. Ireo rehetra ireo dia azo zahana sy voalahatra ao anatin'ny fampiharana Lenovo Watch. Inona koa, tsy tantera-drano.
Ny Lenovo Watch S dia mitentina 238 yuan (~ 30 euro) ary misy amin'ny loko mainty sy mena. Hanomboka hamidy ao amin'ny Lenovo's Official Online Store amin'ny 30 Oktobra izao amin'ny 10 ora maraina any Shina.
Ny Lenovo Watch C dia famantaranandro ho an'ny ankizy. Izy io dia manana efijery AMOLED 1.3 santimetatra, izay rakotra Gorilla Glass ho fanoherana ny hatairana. Etsy ambonin'ny efijery dia misy fakan-tsary izay ahafahan'ny ray aman-dreny, mpiambina na mpiambina ilay zaza manao an'ity finday ity dia afaka mifehy lavitra haka sary hanoratra ny zavatra ataon'ilay zaza.
Ny Watch C dia manana GPS (Glonass, A-GPS) ho an'ny fanarahan-toerana Ary afaka mifandray amin'ny alàlan'ny Wi-Fi ianao. Izy io koa dia manana kompà namboarina. Miaraka amin'ny fampiharana miaraka, ny mpiambina dia afaka mametraka ny toerana misy ny tranokala, toy ny an-trano na any an-tsekoly, ary ampandrenesina rehefa tonga ny mentee-ny any amin'ireo toerana ireo.
Misy mpandahateny sy mikrô koa raha sendra mila miresaka amin'ilay zaza ianao. Inona koa, ny famantaranandro dia azo ampiasaina hiantsoana olona hafa izay manana karazana famantaranandro mitovy. Ho fanampin'izany, dia misy bokotra SOS ho an'ny hamehana, manana isa IPX7 sy fehy silikona izy. 12.8mm ny hateviny ary milanja 42 grama fotsiny.
Ny Lenovo Watch C dia tonga amin'ny manga sy mavokely ary Vidiny amin'ny 399 yuan (~ 50 euro). Ny varotra flash voalohany dia amin'ny 22 Oktobra ao amin'ny magazay an-tserasera ofisialy China.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Lenovo » Lenovo Watch S sy Watch C: famantaranandro mahafinaritra sy famantaranandro marani-tsaina ho an'ny ankizy
Ny fisehoana Google Maps vaovao tsara indrindra 3 tato ho ato